Xiggaha Dhaawaca iyo Ganaaxa Kaga Maqnaanaya Champions League toddobaadkan
HomeChampions LeagueXiggaha Dhaawaca iyo Ganaaxa Kaga Maqnaanaya Champions League toddobaadkan
PSG: Paris Saint-Germain ayaa ah kooxda walaaca ugu badani haysto ee ay ka maqan yihiin ciyaartooyadii ugu muhiimsaa. ZLatan Ibrahimovic ayaa ku maqnaan doona casaan la siiyey ciyaartii Chelsea, iyadoo Marco Verratti iyo Serge Aurier laba kaadh oo digniin ah qaatay sidaas daraadeedna aanay ciyaari doonin. Waxa kale oo dhaawac kaga maqnaan doona Thiago Motta iyo David Luiz oo dhaawacmay.
Barcelona: Dani Alves ayaa ah ciyaartoyga kaliya ee ganaaxan, halka Thomas Vermaelen iyo Jordi Alba ay dhaawac ku seegayaan lugta hore.
Juventus: Juventus ayaa ciyaari doonta iyadoo ay dhaawacyo kaga maqan yihiin Paul Pogba iyo Andrea Pirlo oo aan awoodi doonin in ay ciyaaraan.
Monaco: Laacibka khadka dhexe ee saamaynta badan leh ee Jeremy Toulalan iyo mujaahidka difaaca ah ee Ricardo Carvalho ayaa ka maqnaan doona, iyadoo sidoo kalena aanay ciyaari doonin Lacina Traore iyo Tiemoue Bakayoko oo muddo dheer dhaawac ahaa.
Atletico Madrid: War farxad leh ayuu helay tababare Simeone markii uu ogaaday in Mario Mandzukic uu ka soo kabtay dhaawacii, laakiin waxa kaliya oo shaki kaga jiraa in uu ciyaari doono Raul Garcia oo dhaawac fudud gacanta ka qaba.
Real Madrid: Ma jiro walaac badan oo kooxdaas haysta, iyadoo ay dhawaan u soo noqdeen Pepe, Sergio Ramos iyo James Rodriquez. Kaliya Gareth Bale oo ka maqnaa kulankii Eibar ayaa shaki ku jiraa balse waxa la xaqiijiyey in uu tababarka la bilaabay kooxdiisa oo uu awoodi karayo in uu ciyaaro.
Bayern Munich: Munich waxay ka hortegi doontaa Porto iyadoo ay ka maqan yihiin saddexda ciyaartoy ee David Alaba, Javi Martinez iyo Arjen Robben. Frank Ribery iyo Bastian Schweinsteiger ayaa iyagana uu shaki ku jiraa in ay ciyaari karayaan iyo in kale.
FC Porto: waxa la hubinayaa caafimaadka Jackson Matinez iyo Cristian Tello oo dhaawacyo fudud qaba hase yeeshee lagu adkaysanayo in ay ciyaari karayaan. Kaliya waxa ganaax ku maqan Ivan Marcano, mana jiraan dhaawacyo jira oo dib u dhigi kara ciyaarta wanaagsan ee ay kooxdaasi muujisay.
Oliver Kahn Oo Ka Yaaban Mucjisada Goolwade Manuel Neuer
Wenger Oo Doonaya Inuu Campbell Kooxda Ku Negaado